Xasdi Archives — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
hinaaso hinaaso hinaaso hinaaso hinaaso hinaaso hinaaso hinaaso hinaaso hinaaso hinaaso hinaaso hinaaso hinaaso
Book soo xigsaday: Ha ka hinaasin keydka
Waxaan ciyaaray basketball Iyi dugsiga sare. Taasi waa hadal aad u run (haddii aad i xoogin si ay u qeexaan play erayga). Waxaan ka qeyb galay dugsiga yar ee gaarka loo leeyahay, iyo haddii aad sare ah aad heshay rigoore ah oo ku saabsan kooxda ku Iyi. Waan jeclahay ciyaarta kubbadda kolayga, laakiin wax badan ka wanaagsan at Daawasho ka ciyaaro ayaan ahay. Waan edbinayaa karaan ciyaartoyda iyo guuxi "C'mon!"At garsoorayaasha oo dhan-star xirfad. Laakiin in alla intii tagaa. My dugsiga lahaa xeerka la yaab leh oo ku saabsan this dhab isboortiga ciyaaro si ay u qalin jabiyaan, in kastoo, sidaa darteed waa inaan lagu qasbay ilaa habboon iyo madaxana ii sudhan yihiin in ceeb habeen walba Friday.
tarabuunka ayaa had iyo jeer ahaayeen buuxda kulan. waalidiinta iyo ardayda ku faraxsan-badan oo iyaga ka mid ah saaxiibada mine- ilaa tusay si ay u taageeraan kooxda. Waxaa wax laga xumaado, waxay u badan tahay in lagu sameeyo sida ugu badan ee kala duwan yihiin in ciyaarta sida aan ku sameeyey. Waxaan jeclaan lahaa jaleecada galay biliij ah waqti ka waqti, ka yaabban wixii dadkii oo dhan la fikirka, gaar ahaan aabbe ii. Waxaan qabaa inuu ogaaday in labada naga mid ah oo kaliya waxaa jiray si uu u daawado, laakiin waxaan ku dhacday in ay kursiga ka wanaagsan.
Markii ugu Waxaan kaliya…